IMovie na ọtụtụ-eji usoro ihe omume edezi video faịlụ. Ọ na-eji ndị ọkachamara na site nkịtị, bụ ndị chọrọ ka ha onwe ha oru ngo. Ndị kasị mma atụmatụ nke a usoro bụ: mfe iji na a otutu nhọrọ. N'ụzọ dị mwute, ọ na-nwere ụfọdụ drawbacks. Ka ihe atụ, IMovie gaghị emeghe ma dezie ụfọdụ formats. Mod na MOV faịlụ ndị unsupported site IMovie.
E nwere ọtụtụ nke ngwaọrụ nke ga-ndekọ na a MOV usoro. Ọ bụrụ na ị chọrọ dezie ndị a faịlụ na IMovie, ị ga-tọghata ha mbụ. Ọ bụrụ na nke a bụ gị mgbalị mbụ, o nwere ike ịdị mgbagwoju anya n'ihi na ị. E nwere ọtụtụ mmemme na internet na awade a-ekwe omume. Otú ọ dị, ọ bụghị ha niile, ndị dị irè. Ụfọdụ nwere ike tọghata MOV faịlụ n'ime ndị ọzọ formats na-adịghị nabatara IMovie dị ka mma. Ọzọkwa, ọtụtụ n'ime ha bụ free. A na-emekarị pụtara na ha na-agaghị mepụtara maka ọkachamara. Na njedebe, ị ga-ejedebe na a video faịlụ na nwere ogbenye mma na ọ bụghị nnọọ mma. IMovie nwere ike imeghe ya, ma àgwà-apụghị mma. Ndị a mmemme ị chọrọ iji.
Ihe ngwọta maka nsogbu a bụ Wondershare Video Converter Ultimate. Dị ka a ọtụtụ nnyocha ndị e mere, nke a bụ ndị kasị ewu ewu usoro ihe omume edezi video faịlụ. Ọ dị mfe iji na ọ bụ ọnụ. Ọzọkwa, ị mkpa naanị a di na nwunye nke nkeji na iji budata ma wụnye ya. Ọbụna ndị ọrụ gbalịrị ya maka oge mbụ, na-ekwu na Wondershare Video Converter Ultimate bụ nnọọ ezi omume. Ọzọkwa, ọ bụ ihe kasị mma ọzọ maka converting MOV faịlụ. Akakabarede bụ ngwa na nnọọ mfe iji. Ndị kasị mma atụmatụ nke Wondershare Video Converter Ultimate bụ:
Ọ na-akwado fọrọ nke nta niile formats (gụnyere MOV na mod na-adịghị akwado site na IMovie).
The converted faịlụ nwere ike meghere na-edekwa n'ime IMovie.
The akakabarede bụ ugboro 30 ngwa ngwa karịa on yiri omume.
Ọ bụ maka Mac kọmputa dị ka mma.
E nwere nza nke atụmatụ na pụrụ inyere gị aka ime ka a oké video faịlụ.
Olee otú iji tọghata MOV faịlụ na Wondershare Video Converter Ultimate na mbubata ha n'ime IMovie.
Ọ bụrụ na ị chọrọ mbubata MOV faịlụ na IMovie, ị ga-tọghata ha na Wondershare Video Converter Ultimate. Nke a bụ a dị mfe ọrụ na-achọ n'etiti 5 na 10 nkeji (na-adabere a size nke faịlụ ị chọrọ mbubata). Agbanyeghị, ihe niile ị chọrọ ime bụ na-eso ndị mfe nzọụkwụ.
1. Download na wụnye Wondershare Video Converter Ultimate. Cheta na nke a abụghị a free usoro. Mgbe ị na-eme, na-emeghe ya. Ị ga-achọpụta otú ngwa ngwa ọ bụ.
2. Pịa na '' Tinye faịlụ '' ma ọ bụ ikpuru na dobe ha n'ime usoro ihe omume. Ha ga-kwajuru ozugbo. N'ihi na ọ bụla video i meghere, na i nwere otu edit nhọrọ. Pịa na ya ma ọ bụrụ na ị chọrọ dezie video. Ị ga-ahụ na e nwere ọtụtụ bara uru nhọrọ. Ọzọkwa, ị pụrụ ịhụchalụ video otú i nwere ike na-aghọta otú ọ ga-ele anya dị ka mgbe edezi. Cropping, merging na clipping bụ nanị ụfọdụ n'ime nhọrọ. A onye ọrụ nwere ike ịgbanwe ìhè, olu, iche na saturation n'otu oge.
3. Pịa na mmepụta Format button akụ ma họrọ Format. Nke a na-eji na-ahọrọ usoro a faịlụ ga-mgbe akakabarede. Ị ga-ahọrọ a format na-akwado site na ngwaọrụ ị ga-eji. A ọma n'akụkụ bụ na e nwere ọtụtụ ndị dị iche iche formats, otú i nwere ike ịchọta onye gị mkpa. Họrọ AVI format bụrụ na ị chọrọ pen na video ke IMovie. Otú ọ dị, IMovie akwado a ọtụtụ ndị ọzọ na formats, otú i nwere ike họrọ ha dị ka nke ọma. Ị nwere ike pịa na ngwaọrụ taabụ ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịhọrọ a format na e mere maka nanị otu ngwaọrụ. Ke adianade do, niile ewu ngwaọrụ na-akwado.
4. Pịa tọghata button na-eche. Usoro na-achọ nnọọ a nkeji ole na ole. Adịghị ịkwụsịtụ usoro ma ọ bụ ị ga-eme ya nile ọzọ. Mgbe e mere ya, ị ga-amara gị ọkwa. Cheta na usoro a nwere ike ịdịru ogologo naanị ma ọ bụrụ gị faịlụ buru oke ibu. N'ọnọdụ ndị ahụ, ọ nwere ike ịdịru karịa 30 nkeji. Otú ọ dị, a na-eme naanị ma ọ bụrụ a size nke a faịlụ ibu karịa 1 GB.
5. Mgbe ị na-eme, na-emeghe IMovie na-aga menu File-Import-Movies. Chọpụta ihe nkiri ị chọrọ mbubata ma họrọ ya. Ọ ga-kwajuru na mmemme. Ọ bụrụ na ị ọsọsọp a nzọụkwụ, faịlụ ga-unreadable ọ bụ mebiri emebi. Nke a pụtara na ị ga-enwe ike mbubata ya. Na nke a, na-ekpeghachi niile nzọụkwụ.
Mgbe ị na-emeghe a converted MOV faịlụ na IMovie, i nwere ike ide dị iche iche mmetụta na dezie ya. Mgbe ị na-eme, i nwere ike ịzọpụta ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ dezie ya na ọzọ kọmputa, ị ga-azọpụta ha dị ka ihe emechaghi oru ngo, nyefee ha ka ha a mbughari flash mbanye ahụ na-emeghe ha na ọzọ Mac kọmputa. Cheta na ndị a faịlụ-apụghị meghere on a PC. Nke a bụ a bara uru atụmatụ na ọkachamara na-eji ụbọchị ọ bụla. Ọ na-ekwe ka ị na-arụ ọrụ ọnụ, na ndị enyi gị na otu oru ngo.
Ị ga-aghọta na a MOV faịlụ bụghị a codec, ọ bụ a akpa. Nke a pụtara na ọ ga-dị n'ime IMovie, ma ọ apụghị dezie. Ka ihe atụ, ọ bụrụ na a MOV faịlụ dere DivX, IMovie ga-enwe ike dezie ya, n'ihi na IMovie anaghị akwado ya. Na n'akụkụ nke ọzọ, ị ga-aṅa ntị audio codecs dị ka mma. Ka ihe atụ, AIFF na AAC dị nnọọ ezi ihe na IMovie akwado ha n'enweghị nsogbu. Ke ofụri ofụri, mgbe ị na mbubata a MOV faịlụ n'ime IMovie, niile egwu na audio na-unsupported site IMovie, ga-egosipụta na agba ntụ. Ndị a faịlụ-apụghị dezie. Nanị ihe ngwọta bụ iji tọghata ha, wee dezie ha na IMovie.
> Resource> iMovie> Olee mbubata MOV ka iMovie